Vehivavy mpiady kambana antitra 5 izay tsy manambady - Wwe
Vehivavy mpiady kambana antitra 5 izay tsy manambady
Ny lazan'ny mpiady matihanina dia miaraka amin'ny fandrika atrehiny - na dia ny fahasalamana aza no sorona mandreraka indrindra nataon'ny mpanao ady, ny fianakaviana dia tonga segondra farany. Misy tranga marobe amin'ireo mpiady amin'ny WWE izay tsy afaka nitondra fiainam-pianakaviana sambatra noho ny fandaharam-potoanan'ny dia sy ny toetran'ny asa.
ihany koa vakio: Vehivavy superstar 5 WWE mihoatra ny 30 taona izay tsy manambady
randy orten vs fampisehoana lehibe
Na dia misy superstar vehivavy ambony toa an'i Trish Stratus aza izay efa nisotro ronono tamin'ny tolona mba hananganana fianakaviana, maro ny WWE Superstars no tsy afaka nandray ny fanapaha-kevitra.
Raha io voalaza io, ity misy lisitr'ireo vehivavy mpiady kitra antitra 10 izay mbola tsy manambady na dia miaina ny sain'izy ireo aza.
Tsy nilamina mihitsy i Lita
Iray amin'ireo superstar vehivavy tsara indrindra tsy afa-nandeha tongotra tao anaty peratra WWE i Lita, izay tafiditra amina lafiny romantika marobe. Na dia tafiditra amina fampakaram-bady an-tsary roa eny Raw aza dia mety hahagaga ny maro ny mahafantatra fa mbola tsy nanambady tamin'ny tena fiainana izy.
Hatramin'ny nandraisany anjara tamin'ny WWE tamin'ny taona 1999, dia nifandray tamina essaolo niaraka tamin'i Essa Rios, Christian, Kane ary indrindra i Matt Hardy sy Edge, i Lita.
Nanomboka nampiaraka tamin'i Hardy tamin'ny tena fiainana izy nandritra ny fotoana nihazakazahan'izy ireo tao amin'ny Team Xtreme, saingy nifarana io fifandraisana io taorian'ny nanombohany nifandray tamin'i Edge. Ny raharaha dia nampidirina tao amin'ny zoro WWE izay nanaparitaka ny The Rated-R Superstar tamin'ny sary misy ny hetsika lehibe.
tsy afaka miaraka ny fiainako
Rehefa tapitra ny fifandraisany tamin'i Edge, dia niaraka tamin'i Shane Morton, mpikambana ao amin'ny tarika 'Luchagores', nandritra ny roa taona teo ho eo talohan'ny niarahany niaraka tamin'i CM Punk.
Tsy nisy na iray aza tamin'ny fifandraisana nanjary fanambadiana ary i Lita dia mpitovo sambatra ankehitriny.
ny fomba ilazana zazavavy dia ao aminao
ahoana no manan-karena be an'i mrbeast
vady tsy nahazo asa
inona no nanjo an'i jeff wittek maso